HJRA : Olona roa maty, 257 naiditra hopitaly -
AccueilSosialyHJRA : Olona roa maty, 257 naiditra hopitaly
02/01/2019 admintriatra Sosialy 0
Tsy nieren-doza velively ny faran’ny taona sy ny taom-baovao 2019 teto an-drenivohitra. Araka ny tatitra voaray tao amin’ny vonjy taitran’ ny hopitaly HJRA, dia olona roa no namoy ny ainy nandritra iny fety iny. Iray amin’ireo maty nandritra ny faran’ny taona raha toa ka ny andron’ny taom-baovao ny faharoa. Ity farany dia vehivavy, ary loza nateraky ny kodiaran-droa no fantatra fa nahafaty azy tokony tamin’ny 6ora teo, tamin’ny ora nahatongavany teny amin’ny hopitaly. Fa hatramin’ny omaly hariva tamin’ny 7ora latsaka fahefany kosa dia miisa 257 no marary tonga teny amin’ny HJRA. Ny 196 isa tamin’ireo dia niditra teny an-toerana tamin’ny 31 desambra, ka 170 nalefa nody rehefa nahazo fitsaboana sahaza azy ireo, raha toa ka 26 tamin’ireo no tsy maintsy nampidirina hopitaly satria mila fandidiana, araka ny fanazavana.
Fantatra hatrany fa 66 isa tamin’ireo olona 196 ireo dia olona mifamono, raha toa ka lozam-pifamoivoizana ny miisa 28. Loza niseho tao an-trano indray kosa ny 19 isa, ary loza niseho teny an-dalana ny miisa 14. Ho an’ny andron’ny 1 janoary indray dia ady, lozam-pifamoivoizana no mandrakotra ireo olona miisa 61 tonga teny amin’ny hopitaly hatramin’ny 6ora sy 45 minitra. Isa izay mbola heverina hitombo araka ny fanamarihana, satria mbola tsy tapitra ny fandraisana ny marary tamin’ny ora nahazoana ireo tatitra. Nisy tamin’ireo araka ny fanazavana voaray hatrany, dia ady efa tamin’ny faran’ny taona fa ny taom-baovao teo vao tonga teny amin’ny hopitaly. Raha ny nambaran’ireo tompon’andraikitra tao amin’ny vonjy taitra amin’ny HJRA dia niakatra ny isan’ireo marary tonga teny amin’ny hopitaly tamin’ny faran’ny taona 2018 ireo raha noharina tamin’ny faran’ny taona 2017. Raha 131 isa mantsy izany ny 31 desambra 2017, dia niakatra 196 ho an’ny 31 desambra taona 2018.